Dalka Zimbabwi o xaaladii ugu liidatay e dhaqaale la kulantay, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dalka Zimbabwi o xaaladii ugu liidatay e dhaqaale la kulantay,
Dalka Zimbabwi o xaaladii ugu liidatay e dhaqaale la kulantay,
Lamaanaha kala ah Teddie iyo Vesta ayaa waxay mar walba ku fikiri jireen in si sharaf leh ay ku noolaan doonaan sanooyiinkooda dahabiga ah ee howlgabnimada ka dib.
Teddie waxa uu hadda jiraa 85 sano, waxa uuna muddo 46 sano ah u shaqaynayay hal shirkad oo uu ka ahaa nadiifiye islamarkana uu markii dambe ka noqday qofka jooga xafiiska soo dhaweynta.
Vesta ayaa sheegtay in sicir-bararka ka jira dalka oo sare u kacay uu kala dhantaalay in ay qaataan noolal howlgabnimo oo raaxo leh.
Sanad ka hor ayaa waxaa Teddie uu qaadan jiray lacag howlgabnimo ah oo dhan $80 bishii waxayna taasi imika u dhigantaa $10.
“Aad ayaan uga naxay markaan arkay qofkii aan jeclaa oo fadhiya geeska guriga subaxii ilaa caawa ,” waxaa sidaas BBC u sheegtay Vesta.
“Waxaan jeclaan lahaa in aan siiyo moos,Liin iyo cabitaan qabow,balse ma awoodo ,mooska qiimihiisu waa $0.40.”
Calaamadaha burburka dhaqaalaha meel kasta ayuu ka muuqdaa,suuqyada badeecooyiinka lagu iibiyo ayaa ah kuwa dadku ay buuxaan maalmahan.
Qiimaha cunnooyiinka asaasiga sida sokorta iyo Saliida cunada lagu karsado ayaa sare u kacay 200% muddo 12 bilood gudahood ah , sida ku cad daraasad rasmi ah oo la soo saaray.
Waxaa sidoo kale sare u kacay qiimaha adeega caafimaadka dalkaasi Zimbabwe.
Dhanka kale qiimaha Rootiga ayaa sare u kacat tan iyo bishii April ee sandkan.
Laga soo billaabo bishii June 2019 ee sanadkan sicir-bararka ayaa gaaray 98%. bishii July, waxaa dib loo soo saaray lacagta Zimbabwi ee doolarka ka dib markii toboneeyo sano la isticmaalayay lacagaha qalaad sida doolarka Mareykanka,wuxuuna sicir-bararku gaaray sanadkii 176%.
Qiimaha lacagta Zimbabwi ayaa hoos u sii dhaceysay ,balse dowladda ayaa joojisay daabacaada daraasadaha sicir-bararka.
Dhibaatada dhaqaale ee ugu dambeysay ayaa ku soo beegmaysa iyada oo uu madaxwaynaha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa uu xusayo sanad guuradii ka soo wareegtay markii la doortay.
Robert Mugabe ayaa xilka laga qaaday ka dib markii ninkii ay sida aadka ah isugu dhawaayeen uu talada la wareegay isaga oo gacan ka helaya militariga bishii November 2017.
Dalka Zimbabwi ayaa waxaa doorasho laga qabtay sanadkii xigay 30 bishii July.
Madaxwayne Mnangagwa ayaa ugu magac daray xiligaas “dhalasahada jamhuuriyadii labaad” – taasi oo ku saleysan dib u soo kabasho,xoojinta dimuqraadiyada iyo in dib loo milicsado nidaamkii toboneeyo sano uu ku shaqeynayay ninkii isaga ka horeeyay.
Dad badan oo reer Zimbabwi ah ayaa marki hore aaminsanaa madaxwayneEmmerson Mnangagwa.
Waxay dadka rajeynayeen in xil ka qaadistii Mr Mugabe ay dhiirigalin doonto maalgashadayaasha iney dib us oo laabtaan islamarkana lacagtii ay ganacsatada u baahnaayeen ay iman doonto.,balse rajadaas ayaa noqotay mid beenowday islamarkana waxaa dib u soo laabtay dhibaatooyiinkii hore.
Shidaalka ayaa ah mid gabaabsi ah islamarkana waxay dowladda sheegtay in aysan hayn lacago qalaad oo ay ku soo iibiso,waxaa sidoo kale dib u soo laabatay koranta la’aantii jirtay.
Previous articleGudoomiyaha Baanka Dhexe Cali Baqdaadi Oo Fooqyo Waa Weyn Ka Dhisanaya Magaalada Hargeysa+Sawiro
Next articleDegaamo Ka Mida Ethiopia o Wabigu maro walina laga Isticmaalo Agabkii Doonyaha e qarniyo ka hor la isticmaali jiray